TTSweet: စွယ်တော်မြေမှ ပုံရိပ်ဟောင်းများ ...
Posted by T T Sweet at 4:38 PM
ရွှေရတုမှတ်တမ်း November 7, 2010 at 4:47 PM
ဦးမောင်ရှိမ့်တို့ စာအုပ်ထုပ် ထမ်းနေကြဆိုတော့....
a yan kyaik par the :)...sat yay par own naw...( myanmar lo ma yite tat loh par)
လသာည November 7, 2010 at 6:08 PM
ပန်းလေးတွေနဲ့ အဆောင်သူချောချောလေးတွေက တအားပျော်နေတာနော် :D ပုံရိပ်ဟောင်းလေးတွေက လွမ်းစရာကြီး။ နောက်ပြီး မဆွိ.. တော်တော်နောက်ခဲ့ပုံရတယ်း)))
ကိုပေါ November 7, 2010 at 6:35 PM
ချစ်ကြည်အေး November 7, 2010 at 6:54 PM
ပျော်စရာကြီးနေမှာပဲ....ဆွိကို မျက်နှာပျက်နေပေမဲ့ မှတ်မိပါ့တော်....:P
ရုပ်မပြချင်မှတော့ .. ဓာတ်ပုံတင်မနေပါနဲ့ လား အန်တီဆွိရယ်
ပြချင်းပြရင်လဲ .. အရှင်းလုပ်ပါလို့ ...
khin oo may November 7, 2010 at 7:23 PM
ဖိုးတုတ် November 7, 2010 at 8:28 PM
ကျောင်းသားဘ၀က အပျော်ရဆုံးဘ၀ပဲထင်တယ် ဘာလို.လည်း ဆိုတော့မိဘဆီက ကျောင်းစရိတ်၊ မုန်.ဘိုးယူပြီး ဘာမှအပူအပင်မရှိဖူးလေ၊ ကျွန်တော်လည်း ကျွန်တော့်မေဂျာမှာ Roll 1 ပါ ၊ ဒါပေမဲ့ အတန်းထဲမှာ နောက်ကနေပြန်ရေရလိမ့်မယ်
kay November 7, 2010 at 8:36 PM
တကယ့် ပျော်စရာ လှုပ်ရှားမူ ပုံလေး တွေ။။
လက်ဖက်ရည်ဆိုင်က..ပုံမှာ..တယောက်ကို သိသလိုပဲ။ အမ တယောက် သူငယ်ချင်း။
ပန်းလေးတွေ နဲ့ကာထားလို့ တော်သေးတာပေါ့နော်.. မျက်စိ မှာ အမဲ ကြောင်းလေး တွေ တားမထားလို့..း))
kay November 7, 2010 at 8:38 PM
ကိုမောင်ခြိမ့်ကိုတော့.. ဖော်ထားပြီး.. လေဒီမောင်ခြိမ့်က.. ပန်းတွေ နဲ့ ကွယ်ထားတာ..မတရားဘူး ထင်တယ်။း)
Sonata Cantata November 7, 2010 at 9:18 PM
ဒါ ကြီးနာမည် ဖြစ်မယ်းP
T T Sweet November 7, 2010 at 9:26 PM
ဒါကဒီလိုချိတယ်လေ .... မကေကလဲ ... ဦးမောင်ရှိမ့်က အချက်မချိ ... အဲလေ ဘာတွေ ပြောမိပါလိမ့် ... သူက သူ့ပုံတင်လဲရတယ် ... ကိစ္စမရှိဘူးတဲ့။ ဟိုးအရင်ကထဲကလဲ သူတို့ သားအဖပုံတွေက တင်နေကျမှို့ ခုမှတော့ ထူးပြီးဖုံးမနေတော့ပါဘူး။
ကိုယ့်ပုံကတော့ နဲနဲချက်တတ်လို့ပါခင်ည။ တူနယ်ချင်းပုံတွေကလဲ ခွင့်ပြုချက် မတောင်းထားတော့ ကြိုက်မှန်းမကြိုက်မှန်းမသိ ကိုယ့်ပုံတောင် ကိုယ် မပြချင်တာ သူတို့လဲ ကိုယ့်လိုပဲနေမှာပါဆို ပန်းကလေးတွေနဲ့ ကွယ်ထားလိုက်တာပါဗျာ။ ယောက်ျားလေး သူနယ်ချင်းတွေပုံကျတော့ စိုးရိန်စရာမချိဘူးလေ။ ဖက်ပေါ်ဆူးကျကျ ... ဆူးပေါ်ပဲဖက်ကျကျ ... အဲလေ ဟိုဟာနဲ့ ရောကုန်ပါပြီ ..း )
သူတို့ကို တစ်ပတ်အတွင်းလာကန့်ကွက်နိူင်တယ်ပြောထားသားပဲကို နော် ...။
အဆောင်နေရတာ အရမ်းပျော်စရာ ကောင်းတာပဲ။ စာဆိုတာကတော့ ကျက်ချင်ချင် မကျက်ချင်ချင် လုပ်ကိုးလုပ်ရတာမျိုးလေ။ ဒီလို ဗရုတ်ကျတာက လုပ်ဖူးမှ ကျောင်းသားဘဝက တန်တာ။
ခုလိုလေး ရေးထားတော့ တကယ့်အမှတ်တရပဲ။
ဝက်ဝံလေး November 7, 2010 at 10:31 PM
ယောက်ျားတွေက ခုခေတ်ပြောင်းသွားဘီ မဆွီ ဖက်ပေါ်ဆူးကျကျ မဟုတ်တော့ဘူး
“ ဘဲဥပေါ် ကျောက်ပြင်ပဲ ကျကျ ကျောက်ပြင်ပေါ် ဥ ပဲကျကျ နောက်တော့ ဥပဲ ကွဲတယ် ” တဲ့ ကဲ စကားပုံ အသစ်လေး မှတ်ထားလိုက်အူးနော် ခစ်ခစ်
ဒါနဲ့စကားမစပ် စာရေးဆရာမ မစန္ဒာတို့က မဆွီထက်ကြီးလား ငယ်လား ဂျီဟော မှာနေတယ်ဆိုလို့ မစန္ဒာရဲ့ ဂျီဟောသူ လေး သတိရသွားလို့ အရမ်းကြိုက်တာ
သက်ဝေ November 8, 2010 at 12:40 AM
တကယ်ကို အမှတ်ရစရာကောင်းတဲ့ ပုံရိပ်ဟောင်းတွေပါပဲ...
ဆောင်းရာသီ အအေးငွေ့တွေနဲ့ အတူ Field Trip ရဲ့ မီးပုံပွဲအကြောင်းကတော့ ဘယ်အချိန်တွေးတွေး လွမ်းနေတုန်းပါ...
ဓါတ်ပုံလေးတွေ ဝေဝေဆာဆာနဲ့ လှပတဲ့ ပုံရိပ်ဟောင်းပိုစ့်အတွက် မကေနဲ့ ထပ်တူ ကျေးဇူးတင်သွားတယ် သူငယ်ချင်းရေ...
မစန္ဒာထက် တီတီဆွိက ၂နှစ်လောက် ကြီးမှာပါ ဝက်ကလေး။:)
T T Sweet November 8, 2010 at 2:22 AM
အပေါ်က အနောနိမတ်စ်နော်။ အတည်ပေါက်နဲ့ နောက်တယ်။ တီတီဆွိကနေ ဘွားဘွားဆွိဖြစ်သွားမစိုးလို့ ကမန်းကတမ်း အပြေးအလွှား လာရှင်းပါတယ်း))
ဆရာမ မစန္ဒာက သိပ်တော့စီနီယာမကျပါဘူး။ အဲဒီ ဂျီဟောသူဝထ္ထုထွက်တော့ မဆွိတီတို့ ၃နှစ်သမီးလောက်ပဲ ရှိပါဦးမယ်။ ကိုယ်တွေထက် နှစ်၂၀ကျော် စီနီယာကျပါတယ် ၀က်ဝံလေးရေ။
ဂျီဟောသူ ၀ထ္ထုက အတော်ကောင်းတဲ့ ၀ထ္ထုမှို့ အကြိမ်ကြိမ်ပြန်ပုံနှိပ်နေတော့ ခုခေတ်ကလေးတွေအထိပါ ဖတ်ရတော့ ဆရာမ မစန္ဒာကို ငယ်တယ်ထင်နေကြတာနေမှာပါ။
ဆရာမ မစန္ဒာအကြောင်းရေးထဲ့တဲ့ ၀ီကီမြန်မာလင့် ပါ။
Moe Cho Thinn November 8, 2010 at 2:08 PM
အဲဒီပန်းလေးတွေ ပေးပါလား။ အကောင်းတောင်းတယ် မထင်နဲ့၊ မျက်နှာမြင်ချင်တာ ရှုတ်လို့ ဆွဲယူ လွှင့်ပစ်မလို့..
tin min htet November 9, 2010 at 1:23 AM
တီတီဆွိတို့လို စီနီယာကြီးတွေ အကြောင်းဖတ်ရတာ ပျော်စရာကောင်းပါတယ် (တနှစ်လည်း စီနီယာက စီနီယာပဲ)
တော်ဟန်ဝင်းက အဲလောက်နာမည်ကြီးမှန်း ခုမှသိတော့တယ်။ ကောင်းတဲ့နေရာမှာတော့ မဟုတ်နိုင်ဘူး။ :P
သက်ဝေ November 9, 2010 at 1:25 AM
သဘောကျလို့ ခဏခဏ လာဖတ်တယ်...
ဓါတ်ပုံတွေလဲ ခဏခဏ လာကြည့်တယ်...
တခါဖတ် ဘယ်လောက် လို့ မတောင်းဘူး ဟုတ်...း))
ဝက်ဝံလေး November 9, 2010 at 4:58 AM
အင်း ဒါဆို မဆွီတို့က ဘဘကြီးထက် တော်တော်ငယ်တာပဲ ဘဘကြီး(အမေ့ အမ ရဲ့အမျိုးသား)က မစန္ဒာနဲ့ တနှစ်တည်းလေ ဟင့်အင်း ငယ်တယ်မထင်ပါဘူး မဆွိ မစန္ဒာနဲ့ တွေ့ဖူးပါတယ် သူတောင် သူ့ဝတ္ထုတွေ ပေးဖူးတယ် မှတ်မှတ်ရရ သူ့လက်မှတ်နဲ့ စာအုပ် ၅ အုပ် ပျော်လိုက်တာ ပြောမနေနဲ့
ဟီးးးး အသက်သိချင်လို့ မေးစမ်းကြည့်တာ ဟိ
G Hall သူ November 9, 2010 at 7:50 AM
ပန်းတွေနဲ.ကာထားတော. အမတို. အရင်က ဘယ်လောက်လှခဲ.တယ် ဘယ်လောက်နုခဲ.တယ်ဆိုတာ မသဲကွဲဘူးပေါ.။ ဒါပေမယ်. တချို.အမတွေက ကွယ်ထားလည်း သိသာတယ်။ Beauty Queen, EC rool 1, Mechanical က တော်တော်ဗရုတ်ကျတဲ. အမတို.ပေါ.။
အမပီအေလဲ mechanical ကပဲဟ။
သူ့ကို ကိုမောင်ခြိမ့်ပုံပြတော့ မသိဘူးတဲ့ :((((
တီဆွိဆရာမလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ ဆရာမ တင့်တင့်ရီကို သိမယ်ထင်တယ် ၊ သူတို့နဲ့တော့ နှစ်တူတယ်။ အဲဒါ နှစ်ဘယ်လောက်ကွာလဲ...
T T Sweet November 9, 2010 at 2:59 PM
ပန်းလေးတွေတော့ သည်းခံပါ မချိုသင်းရယ်။
ကိုကိုထက်ရေ တော်ဟန်ဝင်းက အဲဒီတုံးက TV က ပြတဲ့ ဥာဏ်စမ်းပြိုင်ပွဲမှာ ပထမဆုရလို့ နာမည်ကြီးနေတာ။ အရင်ထဲကလဲ အတန်းထဲမှာ နာမည်ကြီးပါတယ်။
အန်တီသက်ဝေ သူငယ်ချင်းတွေ သတိရသွားပြီနဲ့တူတယ်။ ခဏခဏလာအားပေးတာ ကျေးဇူးတောင်တင်နေရပါတယ် အန်တီသက်ဝေရယ်။
ဂျီဟောသူက EC က roll 1 ကိုသိတယ်နဲ့တူတယ်နော်။ ဘယ် batch ကလဲ မသိဘူးနော်။
အစ်မခင်မင်းဇော် ... ဒေါ်တင့်တင့်ရီက မဆွိတီတို့ ဆရာမ အရင်းခေါက်ခေါက်ပါ။ ဆရာမပြန်လုပ်တော့ အဆောင်မှာလဲ အတူတူမှို့ ပိုလို့တောင် ခင်သွားပါတယ်။ ဟိုတစ်လောကတောင် ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ တွေ့သေးတယ်။ ကျွန်မတို့ထက် ၅နှစ်လောက် စီနီယာကျပါတယ်။
susu November 9, 2010 at 6:30 PM
ဆိုရင်ပုတီးလှုပ်ပြလိုက်နဲ့..အ‌ဆောင်မှူးမသိ‌အောင်အသံတိတ်နည်းနဲ့
dkba or dkkk?
ကိုဇော် November 10, 2010 at 8:06 AM
ပျော်ရွှင် ကြည်နူးစရာ ဘဝလေးတွေပေါ့ အစ်မရေ။
အခု အချိန်မှာ ပြန်ပြီး ရေနူးမိယုံက လွဲလို့ ပြန်မရနိုင်တော့ဘူးပေါ့ဗျာ။
ပန်းတွေကတော့ ထူးဆန်းတယ်နော် မျက်နှာမှာ ပွင့်နေကြတယ်။
G Hall သူ November 10, 2010 at 1:14 PM
အပေါ်က ကဗျာဆရာ ကိုကိုထိပ်ပြောင် ...အဲ...ကိုကိုထက်နဲ. သူငယ်ချင်းပါ အမ။
စုချစ် November 10, 2010 at 11:54 PM
ဓါတ်ပုံတွေထဲက ကောင်လေးတွေကို တစ်ယောက်ကမှ မှတ်မမိဘူးဖြစ်နေတယ်တော့... ကိုရေချမ်းကလည်း မှတ်မိဖူးတဲ့...
T T Sweet November 11, 2010 at 2:31 AM
ဘူးသီးပိုင်ရှင်က စုစုပြောတာ ဟုတ်ပါတယ်။
ကိုကိုထက်နဲ့ သူငယ်ချင်းဆိုတော့ အစ်မတို့နဲ့ အပေါ်အောက်နေခဲ့တာပေါ့။ ဘယ်သူများပါလိမ့်နော် ...???
ကြီးတော်ရေ ... အဲဒီထဲက ၅ယောက်လောက်က စလုံးမှာရှိပါတယ်။နောက်ဆုံမှ ပြောပြတော့မယ်။
အင်း အီးစီရိုးဝမ်းမစလို့တီတီဆွိလဲ အပျိုကြီးဘ၀ကလွတ်တာဖြစ်တာမဟုတ်လား .... တော်တော်အားကိုးရတဲ့သူငယ်ချင်း ...... ခွိခွိခွိ
T T Sweet December 11, 2010 at 2:29 AM
အပေါ်က အနောနိမတ်စ်ကတော့ ဓာတ်သိထဲက ဖြစ်မယ်။ အပျိုကြီးတော့ မဖြစ်သေးပါဘူးကွယ်။ အဲဒီအချိန်က။
အစ်မက ကိုတော်ဟန်ဝင်းတို့ ဘက်ခ်ျကဆိုရင် သိပ်မှ အသက်မူကီးသေးတာ။ ဘာလို့ တီတီူဖစ်နေရတာတုန်း။ အဲဒီ အစ်ကိုက ရုပ်ူမင်သူံကားက လွတ်လပ်ရေးနေ့ ပဟေလိူပိုင်ပွဲဝင်ူပီး ဆုတောင် ရသေးတယ်ထင်တယ်။ အစ်မတို့ ခေတ်နောက်ပိုင်းမှာ ထမီတိုတို ၀တ်တာ ပျောက်သွားတယ်နော်။ူပီးတော့ ဒီဘလော့မှာ တစ်ခု သတိထားမိတာ..အစ်မ ဓာတ်ပုံတွေကို ကွယ်ထားပေမယ့်၊ ဂျူဂျူးလေး ပုံတွေကို ဘာလို့ မကွယ်တာလဲ။ ကလေး (သမီး မိန်းကလေး) တစ်ယောက်ရဲ့ ပရိုက်ဗီစီက ပိုအရေူးကီးသလားလို့။
Justakind suggestion or request. If you do not mind could you please change the font colour of your post into black? It is because after awhile, I could not see anything the font red colour and everything is blur. It might be my eye problem as well. :D I think I have to check my vision.
T T Sweet March 7, 2012 at 12:32 AM
Text အရောင် ပြောင်းလိုက်ပါပြီ။ တခြားလူတွေလဲ မပြောရင်သာရှိရမယ် မTsu လိုပဲ ပြသနာရှိလိမ့်မယ်လို့ ထင်လို့ ကြိုးစားပြောင်းပေးလိုက်ပါသည်။ အားပေးမှုအတွက် အမြဲ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
Unknown March 7, 2012 at 8:32 PM
hote kae ama.. thanks million par.. plz call me Tsu or tsu tsu.. မတတ်ခေါ် တော့တမျိုးကြီးပဲ
ဆုမြတ်မိုး May 2, 2013 at 5:51 PM
ဂျီဟောသူဖတ်ပြီး ဂျီဟောဆိပ်တက်နေတယ် တီဆွိ ။ တီဆွိတင်ထားတဲ့ပုံလေးတွေထဲက ပထမဆုံးသုံးပုံကိုမြင်ဖူးသလိုပဲခံစားရတယ် ။ သမီးအမေ ပညာရေးတက္ကသိုလ်တက်တုန်းက RIT ဆောင်နဲ့ဘေးချင်းကပ်ရက်နေဖူးခဲ့ကြတယ် ။ RIT က ညီမလေးတွေနဲ့ခင်တယ် သူတို့တွေအရမ်းစာလုပ်ကြတယ် ။ မျက်မှန်တပ်ရလောက်အောင်စာကြည့်ကြတယ်ဆိုပြီး အမေပြောဖူးတယ် ။ ပြီးတော့ အရမ်းချမ်းသာတဲ့ညီအမနှစ်ယောက်အမွှာပူးအကြောင်းလည်းအမေပြောပြဖူးတယ် ။ သူတို့ကျောင်းပွဲမှာ လေဒီရှုးလေးတွေစီးပြီးရိုက်ထားတဲ့ပုံလေးတွေလည်းအမေ့ဆီမှာမြင်ဖူးတယ် ။ ပြီးတော့ တီဆွိရဲ့ အကျီဝမ်းဆတ်လည်းမြင်ဖူးတယ်..ဟီးးးးးး ။တီဆွိတင်ထားတဲ့ပုံမျိူးလေးသမီးအမေဆီမှာရှိတယ် ။အိမ်ပြန်ရင် ယူလာခဲ့မယ် ။ တီဆွိတို့ဂျီဟောကိုလွမ်းမလွမ်းမသိဘူး သမီးတော့တော်တော်လေးလွမ်းမိတယ် ဟမ်..ဘာမှလည်းဆိုင်ဘူး ။